Mpilalao afisy: fivoarana ara-tantara amin'ny lalao video sy afisy tsara indrindra | Creatives Online
Nerea Morcillo | | General, Inspiration, maro
Loharano: Diario As
Nandritra ny fandrosoan'ny teknolojia, teo amin'ny fiaraha-monina misy antsika, lalao video an-jatony sy an'arivony no novolavolaina izay, nandritra ny taona maro, dia nanjary fahombiazana teo amin'ny taranaka misy antsika ankehitriny. Isika rehetra dia nanao lalao iray izay resahinay, ary raha tsy izany, dia efa hitanay daholo amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainantsika afisy na sora-baventy izay misy zavatra nasondrotra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra anao ny tontolon'ny lalao video izahay, tsy hampiseho aminao ny tantaran'ireo afisy ireo izahay fa ny lohahevitra fototra: ny horonan-tsary.
1 Inona no atao hoe lalao video
1.1 Karazana lalao video
1.1.2 Mitifitra na manenjika
1.1.4 anjara asa
2 Tantara kely
2.1 ny fiandohana
2.3 ny 8 bit
2.4 Consoles 3D
2.5 2000s hatramin'izao
3 Afisy mpilalao
3.3 tsy fantatra
Inona no atao hoe lalao video
Azo antoka fa efa fantatrao hoe inona izany, saingy vitsy dia vitsy no mahalala ny tena famaritana azy. Ny lalao video dia raisina ho toy ny fampiharana ifanakalozan-kevitra miompana amin'ny fialamboly izay, amin'ny alalan'ny baiko na fanaraha-maso sasany, mamela ny fanahafana traikefa amin'ny efijery a TV, iray solosaina na fitaovana elektronika hafa.
Anisan'ny iray amin'ireo haino aman-jery fialamboly maro misy izy ireo, ary koa, amin'ny lalao video dia afaka ny ho mpilalao fototra isika, ary noho izany, afaka mifehy ny mombamomba ny mpampiasa isika.
Mba hifehezana sy hamoronana ireo hetsika ireo dia mila mampiasa controller ianao (fantatra ihany koa amin'ny hoe lalao pad o joystick), izay handefasana baiko any amin'ny fitaovana fototra (solosaina na console manokana) ary hita taratra amin'ny efijery miaraka amin'ny hetsika sy ny fihetsiky ny olona.
Karazana lalao video
Amin'izao fotoana izao, be dia be ny lalao video. Samy manana andraikitra sy toetra mampiavaka azy ny tsirairay. Toy izany koa no mitranga amin'ny sinema sy ny mozika, misy lisitra lava sy saro-takarina amin'ny karazana sy subgenres, ary ny fanasokajiana ny lohateny mitovy dia mety miovaova arakaraka izay mandinika azy.
Ny sehatra dia miteraka traikefa iray izay ivoahana amin'ny fanamby ara-batana ny aventure na ny tetika fototra, izay itakian'izy ireo ny mari-pahaizana ambony amin'ny mpilalao mba handroso amin'ny rafitra sarotra, amin'ny ankapobeny dia miatrika fahavalo samihafa. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia tsy isalasalana Super Mario Bros, novolavolain'ny Nintendo tamin'ny 1985 sy ny mpamorona azy Shigeru Miyamoto.
Mitifitra na manenjika
Matetika izy io no iray amin'ireo karazana midadasika indrindra. Ny anarany amin'ny teny anglisy dia mpitifitra ary, manondro ny hetsika mitifitra. Tsy voatery ho fitaovam-piadiana izany, satria ny tsirairay amin'ireo lalao ireo dia mifantoka amin'ny fandrosoan'ny mpilalao fototra amin'ny fampiasana hery sasany izay alefa amin'ny fahavalo, na amin'ny endrika projectile na tselatra sns.
Ny lalao Adventure dia tsy isalasalana fa ny karazana ampiasain'ny mpampiasa indrindra. Izy ireo dia ireo lalao izay misy tantara foana, ary ny tantara no tena zava-dehibe. Toy ny tantara rehetra, dia tsy maintsy misy fitantarana tsara sy zava-nitranga sasany. Ny mpilalao fototra, ny toerana misy azy ary ny tantara dia matetika no singa fototra mahaliana amin'ity karazana lalao video ity.
Ny lalao an-tsehatra dia matetika afangaro amin'ny lalao fitsangatsanganana, satria mitovy ihany izy ireo fa, tsy toy ny farany, ny fifantohan'izy ireo dia. ny toetra sy ny fivoarany manaraka ny tantara. Ity karazana ity dia malaza indrindra any amin'ny firenena toa an'i Japana, na dia misy vondrom-piarahamonina RPG maro eran'izao tontolo izao aza.
Matetika izy ireo dia anisan'ny karazana hetsika, lalao ara-panatanjahantena maneho amim-pahatokiana ny fitsipiky ny fitsipi-pifehezana tany am-boalohany, fa tsy amin'ny haavon'ny milimetatra, fa mampiasa fahazoan-dàlana sasany, toy ny hoe ny fotoana mandroso haingana kokoa noho ny zava-misy.
Araka ny hitanao dia misy karazana maro samihafa. Tokony ampiana ihany koa fa amin'izao fotoana izao dia maro ireo karazana vaovao novolavolaina.
Sarotra be ny mahafantatra tsara hoe iza no lalao video voalohany novolavolaina, saingy ny manam-pahaizana sasany dia nanapa-kevitra fa Naught and crosses, antsoina koa hoe. OXO, novolavolain'i Alexander S. Douglas tamin'ny 1952. Dika informatika ilay lalao, mitovy amin'ny tic-tac-toe izay nandeha tamin'ny EDSAC ary namela mpilalao olombelona iray hilalao amin'ny milina.
Tamin'ny 1958, nisy lehilahy iray antsoina hoe William Higginbotham namorona, noho ny fandaharana kajy ny lalana sy ny oscilloscope, Tenisy ho an'ny roa (tenisy ho an'ny roa): simulator tenisy ambony latabatra, izay natao ho fialamboly ho an'ireo mpitsidika ny fampirantiana National Laboratory Brookhaven.
Taona maro taty aoriana, i Steve Russell, dia namorona lalao video ho an'ny solosaina iray izay misy vectors ny sary ary novana anarana Spacewar. Ny lalao dia nifehy sambo roa aerodynamic izay niady.
Tamin'ny 1966, Ralph Baer, ​​​​Albert Maricon ary Ted Dabney, dia niara-nanamboatra lalao video antsoina hoe. Fox sy amboadiaTsy isalasalana fa io no lalao video an-trano voalohany ary iray amin'ireo lalao video voalohany mifandray amin'ny fahitalavitra.
Tena zava-dehibe tamin'ity taona ity tamin'ny vanim-potoanan'ny lalao video, hatramin'ny nanombohan'i Nolan Bushnell nivarotra tamin'ny Computer Space, dika Spacewar nohavaozina kokoa.
Ireo fanavaozana ireo dia nanome lalana ny milina arcade Pong izay heverina ho dika ara-barotra amin'ny lalao Tennis for Two Higginbotham. Ny rafitra dia noforonin'i Al Alcom ho an'i Nolan Bushnell ao amin'ny Atari vao naorina.
ny 8 bit
Tamin'ny taona 80, nitombo hatrany ny sehatry ny lalao video, ary nampiana milina lalao video arcade tamin'izany rehetra izany. Namorona sy namboarina ireo efitrano feno karazana milina ireo. Ny consoles voalohany dia natao tamin'ny taona 70.
Ny rafitra toy ny Oddyssey 2 (Phillips), Intellivision (Mattel), Colecovision (Coleco), Atari 5200, Commodore 64, Turbografx (NEC). Amin'ny lafiny iray, ny lalao toa ny malaza Pacman (Namco), Battle Zone (Atari), Pole Position (Namco), Tron (Midway) na Zaxxon (Sega) dia nandresy tamin'ny milina arcade.
Taty aoriana, nisafidy ny fampiononana i Japana, namorona izay fantatsika ankehitriny hoe Nintendo. Natomboka tamin'ny 1983 izy io. Izany no nivoahan'ny lalao video Nintendo voalohany, Super Mario Bros, roa taona taty aoriana, ary niaraka tamin'izany, ny famoronana ny malaza. Lalao Boy.
Tamin'ny taona 90, ity taranaka ity dia nahita fitomboana lehibe teo amin'ny isan'ny mpilalao sy ny fampidirana ny teknolojia toy ny CD-ROM, fivoarana manan-danja ao anatin'ireo karazana lalao video samihafa, indrindra noho ny fahaiza-manao ara-teknika vaovao.
Tamin'ny taona 2000, Sony dia nanangana ny Play Station 2 raha niditra tao amin'ny indostrian'ny console i Microsoft tamin'ny famoronana Xbox tamin'ny 2001.
Amin'ity taona ity dia misy ihany koa ny famoronana toy ny Game Boy Advance.
Ny afisy mpilalao dia tonga niaraka tamin'ny famoronana lalao video. Maro amin'izy ireo no tena fantatra ankehitriny ary ny hafa dia nohavaozina nandritra ny taona maro.
Ny iray amin'ireo afisy mahazatra indrindra, tsy isalasalana, dia ny an'ny Super Mario Bros. Nintendo dia nanamboatra ireo afisy ireo mba hampiroboroboana ny famoahana ny lalao video. Ny loko dia tena manaitra, tena mahazatra ny fitazonana an'io fomba vintage io amin'ny fotoana misy azy. Ny endri-tsoratra dia mahazatra amin'ny Nintendo, karazana sans serif, somary midadasika sy manaitra. Tsy isalasalana fa miatrika ny iray amin'ireo lalao vidéo izay niditra indrindra tamin'ny fiaraha-monina misy antsika isika ary maharitra hatramin'izao.
Tsy isalasalana fa miatrika ny iray amin'ireo lalao video maoderina sy malaza indrindra amin'izao fotoana izao isika. Ny Call of Duty dia mandray ny anaran'ny lalao video hetsika sy fanenjehana izay ahafahan'ny mpampiasa mifehy ny ekipan'ny ady izay tsy maintsy miady sy mandresy amin'ny ady atrehiny. Amin'izao fotoana izao, ity lalao video ity dia efa manana dikan-teny mihoatra ny 5 samihafa, amin'ny tsirairay amin'izy ireo dia misy ady vaovao sy fomba vaovao hifaninanana. Ny sasany amin'ireo afisin-dry zareo dia miavaka amin'ny lokony manaitra sy noho ny endri-tsoratra mampiavaka azy ka mamadika ny mpampiasa, momba ny inona ilay lalao video.
Uncharted dia iray amin'ireo lalao fitsangatsanganana malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Mihodina amin'ny fiainan'ny Nathan Drake, mpitsangatsangana izay, izay ny iraka dia ny hahazo ny tratra lehibe indrindra ary hiatrika ireo fahavalo izay maka ireo harena ireo. Amin'izao fotoana izao, ity lalao ity dia manana dikan-teny mihoatra ny telo samy hafa, ny tsirairay amin'izy ireo dia miatrika irery na miaraka. Matetika misy loko maizina ny afisy ary ny typography mampiavaka azy no mahatonga azy io ho iray amin'ireo lalao izay manjaka amin'ny tantara rehetra. Izy io koa dia iray amin'ireo kilalao tena nivoatra indrindra.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nahatsapa isika fa tsy vitan'ny hoe nandroso amin'ny maha-fiarahamonina antsika, fa nandroso niaraka tamintsika koa ny lalao video.
Ny lalao video dia ary mbola ho iray amin'ireo fitaovana fandrebirebena sy fialamboly tsara indrindra. Tsy mbola fantatra mazava izay ho avy ao anatin'ny taona vitsivitsy, fa azo antoka fa hisy tantara vaovao hipoitra hotantaraina ary hihaona amin'ireo mpandray anjara.
Tonga izao ny fotoana hidiranao amin'ny fomba manokana, ampio ny bokotra ON amin'ny console anao ary midira amin'ireo singa maro mandrafitra azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Afisy mpilalao
Andian-teny ho an'ny mpaka sary